သူတို့နဲ့ ကိုယ်တို့နဲ့ ဘာကွာလဲ …လေးစားလောက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီး – ရွှေအလင်း
ဒီနေ့ ၂၅.၇.၂၀၁၈ရက်နေ့ မွန်းတည့် (၁၂)နာရီခန့်က မုဒုံမြိနယ် နိုင်းပြိုင်ကျေးရွာ ကော့ခိုက်လမ်းဝအနီးမှာ ဆိုင်ကယ်(၃)စီးဆင့် တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
အဆိုပါ ဆိုင်ကယ်သုံးစီးဆင့် ယာဉ်တိုက်မှုမှာ လူငယ် ပိုင်း အမျိုးသား ၂ဦး နဲ့ လူကြီးပိုင်းအမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်။ လူငယ်တစ်ဦးက စိုးရိမ်ရ အခြေအနေနဲ့ သွေးထွက် သတိလစ်ပြီး လမ်းလယ်ခေါင်မှာ လဲနေတယ်။
တွ စီးလာတဲ့ ၃ဘီးဆိုင်ကယ်တစ်စီးလဲ အခင်းဖြစ်နေရာကို ရောက်လာတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်နေတာကိုလဲ မြင်ရော ကားပေါ်က နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦးက ၃ဘီးကို ရပ်ခိုင်း အောက်ဆင်းပြီး လူနာကို စမ်းကြည့်ပြီး အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်ပေး တော့တာပဲ။
သူတောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဘာသာစကား နားမလည်ကြတော့ ဘယ်သူမှလဲ ပြန်မပြောနိုင်ကြဘူး။ နောက်ဆုံးသူလဲ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့သာ ပြောပြီး အရေးပေါ်ကား လာတဲ့အထိ လူနာကို ထိန်းထားပြုစုပေးပြီး ကူညီခဲ့တယ်။ သူ့ခမျာ သွေးတွေနဲ့ လူနာကို ကိုင်နေရပေမဲ့ လက်အိတ်တောင် မရှိရှာဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ကားကိုရပ်ပြီး ကူညီပေးခဲ့တယ်။
နောက်မှ မုဒုံ Rescue အဖွဲ့နဲ့ နိုင်းပြိုင်အဖွဲ့တို့ ရောက်ရှိ လာပြီး လူနာတွေကို ပြုစုပြီး ဆေးရုံကို ခေါ်ဆောင်သွား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (အခင်းဖြစ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်အစအဆုံး မြင်တဲ့ဒေသခံ တစ်ဦးက ဖြစ်စဉ်နဲ့ဓါတ်ပုံတွေ ပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်)
ယာဉ်တိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲသတင်းကို မုဒုံ Rescue အဖွဲ့မှ နောက်ဆက်တွဲသိရတာက ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် (၉၀၄)တပ် ထိန်လင်းစိုး(၂၂)နှစ်(ဘ)ဦးမောင်ကြီးမှာ ဘယ်လက်ကျိုးဒဏ်ရာ ရင်ဘတ်အတွင်းဒဏ်ရာရရှိပြီး မော်လမြိုင်မြို့နယ် မြိုင်သာယာနေသူ ပြည့်ဖြိုးအောင် (၂၂)နှစ်မှာ ဘယ်ခြေသလုံးအရိုးကျိုးဒဏ်ရာ ညာခြေဖမိုးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ ခြေဖနောင့်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ….
မော်လမြိုင်ဂွေးဂုန်းရပ်ကွက်နေသူ ဒေါ်ခင်ယု(၄၁)နှစ်မှာ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းဒဏ်ရာရရှိပြီး ကျန်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှာ မိတ်ဖက်အသင်းဖြစ်သောနိုင်ပြိုင်ကျေးရွာအသင်းသားများနှင့်အတူ မုဒုံအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးMERO အဖွဲမှ အချိန်မှီ သွားရောက်ပြုစုကူညီပေးပြီး မော်လမြိုင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ စနစ်တကျ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
[အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုတွင် ပါဝင် ကူညီပေးသော နိုင်ငံ ခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား] အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါကြောင်း မုဒုံ Rescue Page မှာလည်း တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက သူတို့တွေနဲ့ ကိုယ်တွေနဲ့ လူအသက် တွေကို တန်ဖိုးထားမှုခြင်း ကွာခြားတာပါ။ ကိုယ်သာဆို သူများနိုင်ငံ အလည်အပတ်ရောက်နေချိန် ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုး တွေ့လို့ကတော့ သူ့နိုင်ငံ သူ့ဥပဒေ ဘယ်လိုရှိမှန်း မသိပဲ ကူညီပေးရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကားကိုရပ် လူတွေ အုံကြည့်နေကြတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကြားထဲကနေ ဆင်း ပြီး ကူညီပေးခဲ့တာ …ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့စိတ်ဓါတ်တွေကို လေးစားမိလို့ ဒီ Post လေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု ပေးလိုက်တာပါ။
Credit Zin Moe
ဒီနေ့ ၂၅.၇.၂၀၁၈ရကျနေ့ မှနျးတညျ့ (၁၂)နာရီခနျ့က မုဒုံမွိနယျ နိုငျးပွိုငျကြေးရှာ ကော့ခိုကျလမျးဝအနီးမှာ ဆိုငျကယျ(၃)စီးဆငျ့ တိုကျမှုဖွဈပှားခဲ့တယျ။
အဆိုပါ ဆိုငျကယျသုံးစီးဆငျ့ ယာဉျတိုကျမှုမှာ လူငယျ ပိုငျး အမြိုးသား ၂ဦး နဲ့ လူကွီးပိုငျးအမြိုးသမီး တဈဦးတို့ ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွတယျ။ လူငယျတဈဦးက စိုးရိမျရ အခွအေနနေဲ့ သှေးထှကျ သတိလဈပွီး လမျးလယျခေါငျမှာ လဲနတေယျ။
တှ စီးလာတဲ့ ၃ဘီးဆိုငျကယျတဈစီးလဲ အခငျးဖွဈနရောကို ရောကျလာတယျ။ ယာဉျတိုကျမှု ဖွဈနတောကိုလဲ မွငျရော ကားပျေါက နိုငျငံခွားသူတဈဦးက ၃ဘီးကို ရပျခိုငျး အောကျဆငျးပွီး လူနာကို စမျးကွညျ့ပွီး အရေးပျေါကူညီကယျဆယျရေး ဆောငျရှကျပေး တော့တာပဲ။
သူတောငျးတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ဘာသာစကား နားမလညျကွတော့ ဘယျသူမှလဲ ပွနျမပွောနိုငျကွဘူး။ နောကျဆုံးသူလဲ လကျဟနျခွဟေနျနဲ့သာ ပွောပွီး အရေးပျေါကား လာတဲ့အထိ လူနာကို ထိနျးထားပွုစုပေးပွီး ကူညီခဲ့တယျ။ သူ့ခမြာ သှေးတှနေဲ့ လူနာကို ကိုငျနရေပမေဲ့ လကျအိတျတောငျ မရှိရှာဘူး။ ဒါပမေဲ့ လူ့အသကျကို တနျဖိုးထားပွီး ကားကိုရပျပွီး ကူညီပေးခဲ့တယျ။
နောကျမှ မုဒုံ Rescue အဖှဲ့နဲ့ နိုငျးပွိုငျအဖှဲ့တို့ ရောကျရှိ လာပွီး လူနာတှကေို ပွုစုပွီး ဆေးရုံကို ချေါဆောငျသှား နိုငျခဲ့ပါတယျ။ (အခငျးဖွဈခွငျး ဖွဈစဉျအစအဆုံး မွငျတဲ့ဒသေခံ တဈဦးက ဖွဈစဉျနဲ့ဓါတျပုံတှေ ပေးပို့လာတာဖွဈပါတယျ)
ယာဉျတိုကျမှုနောကျဆကျတှဲသတငျးကို မုဒုံ Rescue အဖှဲ့မှ နောကျဆကျတှဲသိရတာက ယာဉျတိုကျမှုကွောငျ့ (၉၀၄)တပျ ထိနျလငျးစိုး(၂၂)နှဈ(ဘ)ဦးမောငျကွီးမှာ ဘယျလကျကြိုးဒဏျရာ ရငျဘတျအတှငျးဒဏျရာရရှိပွီး မျောလမွိုငျမွို့နယျ မွိုငျသာယာနသေူ ပွညျ့ဖွိုးအောငျ (၂၂)နှဈမှာ ဘယျခွသေလုံးအရိုးကြိုးဒဏျရာ ညာခွဖေမိုးပေါကျပွဲဒဏျရာ ခွဖေနောငျ့ပေါကျပွဲဒဏျရာ….
မျောလမွိုငျဂှေးဂုနျးရပျကှကျနသေူ ဒျေါခငျယု(၄၁)နှဈမှာ ဝမျးဗိုကျအတှငျးဒဏျရာရရှိပွီး ကနျြမိနျးကလေးတဈဦးမှာ မိတျဖကျအသငျးဖွဈသောနိုငျပွိုငျကြေးရှာအသငျးသားမြားနှငျ့အတူ မုဒုံအရေးပျေါကယျဆယျရေးMERO အဖှဲမှ အခြိနျမှီ သှားရောကျပွုစုကူညီပေးပွီး မျောလမွိုငျ ပွညျနယျပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ စနဈတကြ ကူညီပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
[အဆိုပါ ယာဉျတိုကျမှုတှငျ ပါဝငျ ကူညီပေးသော နိုငျငံ ခွားအမြိုးသမီးတဈဦးအား] အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိအပျပါကွောငျး မုဒုံ Rescue Page မှာလညျး တငျထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဆိုလိုခငျြတာက သူတို့တှနေဲ့ ကိုယျတှနေဲ့ လူအသကျ တှကေို တနျဖိုးထားမှုခွငျး ကှာခွားတာပါ။ ကိုယျသာဆို သူမြားနိုငျငံ အလညျအပတျရောကျနခြေိနျ ဒီလိုဖွဈစဉျမြိုး တှလေို့ကတော့ သူ့နိုငျငံ သူ့ဥပဒေ ဘယျလိုရှိမှနျး မသိပဲ ကူညီပေးရဲမှာ မဟုတျပါဘူး။
သူတို့ကတော့ ဒီလိုမဟုတျပါဘူး။ ကားကိုရပျ လူတှေ အုံကွညျ့နကွေတဲ့ ကိုယျ့လူမြိုးတှကွေားထဲကနေ ဆငျး ပွီး ကူညီပေးခဲ့တာ …ဘာပဲဖွဈဖွဈ သူတို့စိတျဓါတျတှကေို လေးစားမိလို့ ဒီ Post လေးနဲ့ မှတျတမျးတငျ ဂုဏျပွု ပေးလိုကျတာပါ။
“မွေးစားထားတဲ့ ကလေးတွေအတွက် မွေးနေ့ပွဲလေး လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ”
ရန်ကုန်မြို့ ၁၉ လမ်း မီးလောင်မှုမှာ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ သားသားလေး မောင်အောင်ဟိန်းပိုင်
နောက်တခါ အအေးဗူးတွေဘီယာဗူးတွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ
“ဖေဖေရယ် မေမေရယ် ချစ်တုန်ဆရာကြီးရယ် သာသာယာယာပဲ”ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်တို့ မိသားစုရဲ့...
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ပွဲကိစ္စ စည်သူတင်စိုး ကိုယ်တိုင် အသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင် တည်သုံး ယတြာဆိုတာ ဒီလိုပါ...